Umbuzo VRS SUPERBUG X
unyaka 1 11 edlule - unyaka 1 11 edlule #415 by Colonelwing
kuyinto sekulingisa enemininingwane kakhulu futhi kunembile kwendiza ukulwa wake zenzelwe Microsoft sendiza. I Superbug njengamanje kuwumphumela iminyaka cishe 10 umsebenzi eyaqala FS2004, futhi uyaqhubeka ingasekelwa ne ukukhishwa njalo. Kusukela Avionics ukuze isikhali izinhlelo, uma ku izindiza real, kungenzeka kule sekulingisa! I Superbug ungowokuqala (kanye kuphela) kweqiniso 3-eksisi fly-by-wire ukulwa izindiza eyenzelwe FSX. Uhlelo lokulawula indiza akuyona "fly-by-wire-like" CAS, kungcono ashukumisayo ngokuphelele, okulawula-umthetho ancike uhlelo ezilinganiselwe ukushayela olulodwa (i-Odinensi ezimele) neutrally-luxhumanisa-ezinzile imodeli base indiza. Uhlelo FBW kudlulela 100% ngokwezifiso sasilokhu futhi umqondisi indiza imisebenzi.
Uma ufuna wakho a real BUG ,, lo nguye ofuna ukundiza bese segiya Gentelmen!
VRS Ukusekela Forums
unyaka 1 11 edlule - unyaka 1 11 edlule #423 by Gh0stRider203
nje Gonna ashiye le lapha
Ukuhlela kokugcina: Unyaka we-1 izinyanga ezingu-11 ezedlule Gh0stRider203.
unyaka 1 11 edlule #424 by Colonelwing
Haaaaaa ,, ngakho yakho umfana ohlakaniphile eh !!!
unyaka 1 11 edlule #429 by Gh0stRider203
Isikhathi ukudala page: 0.211 imizuzwana